‘हामीले पत्रकारितामा धेरै कुरा ‘मिस’ गरेका छौँ, ती पुरा गर्ने रहर छ’ – Media Kurakani
‘हामीले पत्रकारितामा धेरै कुरा ‘मिस’ गरेका छौँ, ती पुरा गर्ने रहर छ’
May 26th, 2015 Rabi Raj Baral Media News
पत्रकार गुणराज लुइँटेल नागरिक दैनिकको सम्पादक नियुक्त भएका छन्। प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानले सोमबार राजीनामा दिएपछि पाँचौ सम्पादकको पर्खाइमा रहेको नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिले लुइँटेललाई मंगलबार नागरिक दैनिकको सम्पादक नियुक्त गरेको हो।
रिपब्लिक मिडियाद्वारा सञ्चालित नागरिकन्युज डट कमले ‘नेपाल रिपब्लिक मिडिया सञ्‍चालक समितिको बोर्डले उनलाई मंगलबार सम्पादकमा नियुक्त गरेको’ लेखेको छ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रवन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवाली र निर्देशक शोभा ज्ञवालीले लुइँटेललाई स्वागत गरेका थिए। कर्पोरेट अफेयर्स म्यानेजर सम्वृद्धि ज्ञवाली पनि सँगै थिइन्।
फोटो साभारः nagariknews.com
सोमबार प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानसँगै नागरिकका सेकेन्डम्यान सुदीप श्रेष्ठले नागरिक छोडेका थिए। नागरिक छोडेका पत्रकार प्रतीक प्रधानले समाजसेवामा लाग्ने बताएका छन् भने सुदीप श्रेष्ठ तीन महिना अध्ययनका लागि सिंगापुर जाने भएका छन्।
को हुन् गुणराज?
गुणराज लुइँटेल गत बैशाख पहिलो साता सञ्चारिका अनलाइनको सम्पादक नियुक्त भएका थिए। यसअघि अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको सम्पादक रहेका उनले कान्तिपुर दैनिक र नागरिक दैनिकमा रहेर लामो समय काम गरेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट नयाँ व्यवस्थापनमा जानुअघि पनि उनी त्यहाँ कार्यकारी सम्पादक भैसकेका थिए।
नागरिक दैनिकको पश्चिमेली संस्करणको आवासीय सम्पादकको रुपमा पनि उनले काम गरेका थिए। पछिल्लो समय उनी सेतोपाटी डट कममा प्रमुख लेखक/टिप्पणीकारको रुपमा आवद्ध थिए।
लुइँटेलले फिलिपिन्सको अटेनियो डे मनिला युनिभर्सिटीबाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
युगसम्वाद साप्ताहिकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका उनी सिंगापुरको नान्याङ टेक्नोलाजिकल युनिभर्सिटीका एसिया जर्नालिजम फेलो (२०१०) समेत हुन्।
कार्यकक्षमा सम्पादक गुणराज लुइँटेल। फोटो साभारः प्रकाश तिमिल्सिनाको फेसबुकबाट।
नागरिकको सम्पादक नियुक्त भएका लुइँटेलसँग हामीले प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गरेका थियौँ।
उनको जबाफ थियो- नागरिक आफैमा एउटा राम्रो पत्रिका हो। यो (नेपाल रिपब्लिक मिडिया) राम्रो संस्था हो। हामीले यसमा ‘भ्यालु एड’ गर्न सक्छौँ।
‘नयाँ योजना के छन् त तपाईँसँग?’
पत्रकारितामा हामीले गर्नु पर्ने कुराहरु नै कति धैरै छन्। पत्रकारितामा धेरै कुरा हामीले ‘मिस’ गरेका छौँ। ती मिस गरेका कुरा पुरा गर्ने रहर छ। पत्रकारिता एउटा राम्रो वाचडग फङ्सनिङ (Watchdog Functioning) होस्। पाठकलाई भेरिफाइड इन्फर्मेसन जाओस्। मिडियाको रोल भनेको त इन्फर्म्ड सिटिजनरी क्रियट गर्ने हो नि। हामीले पनि त्यसैको लागि काम गर्ने हो। पत्रकारिताका बेसिक इलिमेन्टलाई मैले यो अर्गनाइजेसनमा कसरी स्ट्रेन्देन गर्न सक्छु भन्नेमा मेरो ध्यान हुने छ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले स्थापनाको सातौँ वर्षमा पाँचपटक सम्पादक फेरेको हो। छिटोछिटो भैरहने सम्पादक परिवर्तनबारे धेरैले फेसबुक र ट्विटरमा जिज्ञासा राखेका छन्। त्यही प्रश्न हामीले लुइँटेललाई सोध्यौँ।
‘यति छिटोछिटो सम्पादक किन परिवर्तन हुन्छन् एउटा संस्थामा?’
‘प्रकाशक र सम्पादकका एक्स्पेक्टेसन (अपेक्षा) पुरा नभएर होला जस्तो मलाई लाग्छ’, लुइँटेलले भने, ‘दुईजनाबीचको हार्मोनीले नै एउटा सम्पादक कुनै संस्थामा लामो समय रहने हो।‘
‘अनि तपाईँ सम्पादक हो वा प्रधान सम्पादक?’
‘चाहे प्रधान सम्पादक भनौँ वा सम्पादक। मुख्य कुरा काम हो। जे भने पनि मैले गर्ने काम हो। त्यसैले मेरा लागि दुबै उस्तै हो।‘
सातौँ वर्ष, पाँचौ सम्पादक
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रालिमा कैलाश सिरोहियाका व्यापारिक साझेदार रहेको ज्ञवाली परिवार २०६५ साउन १६ मा सिरोहिया परिवारबाट छुट्टिएको थियो। त्यसको केही महिनापछि ज्ञवाली परिवारले नेपाल रिपब्लिक मिडिया स्थापना गरेको थियो।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले नागरिक दैनिक, रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिक र नागरिकन्युज डट कम न्युज पोर्टल सञ्चालन गर्छ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाको छैटौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीले यो वर्ष एक टेलिभिजन च्यानल र दुई म्यागेजिन स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए।
कान्तिपुरसँग अलग्गिएपछि नयाँ राष्ट्रिय दैनिकको तयारी थालेको ज्ञवालीको प्रकाशन संस्थाले सुरुमा युवराज घिमिरेलाई प्रधान सम्पादक नियुक्त गरेको थियो।
तर २०६६ वैशाख ११ गते नागरिक दैनिक सुरु हुँदा घिमिरेले राजीनामा दिइसकेका थिए र नारायण वाग्ले प्रधान सम्पादक भए। वाग्लेको तीन वर्षीय कार्यकालपछि किशोर नेपाल एक वर्ष र त्यसपछि दुई वर्ष प्रतीक प्रधान नागरिकको प्रधान सम्पादक बने।
दुई वर्षअघि सम्पादक नियुक्त भएका प्रतीक प्रधानको राजीनामापछि गुणराज नागरिक दैनिकको पाँचौँ सम्पादक नियुक्त भएका हुन्।
Tags Guna Raj Luitel Nagarik Daily Nepal Republic Media
पाँचौ सम्पादक कुर्दै नागरिक, राजीनामा दिएका प्रतीकको के छ प्लान? »
« एभिन्युज टेलिभिजनको लाइसेन्स रद्द भएको छैन रे? कुरीकुरी मन्त्री ज्यू!
[…] रिपब्लिक मिडिया प्रालिले मंगलबार लुइँटेललाई नागरिक दैनिकको सम्पादक नि… गरेको […]
प्रतीक प्रधान प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नियुक्त | Media Kurakani (#)
[…] प्रधानले गत बैशाख १२ गतेबाट लागू हुने गरि नागरिक दैनिकको प्रधानसम्पादकबाट बिदा लिएका थिए। उनको ठाउँमा पत्रकार गुणराज लुइँटेल नियुक्त भएका छन्। […]